Ukuvavanya i-Netbook kwi-CAD/GIS-Geofumed
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ukuvavanya iNetbook kwiCAD / GIS
Geospatial - GISIntelliCADGIS asiboniseMicrostation-Bentley
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndaqwalasela ukuvavanya indlela i-Netbook esebenza ngayo kwindawo ye-geomatic, kule meko ndiye ndavavanya i-Acer One ukuba abanye abachwephesha basemaphandleni bandicele ukuba ndiyithenge ngexesha lokutyelela esixekweni. Ulingo lwandinceda ukuba ndithathe isigqibo sokuba ndityale imali kwenye i-HP esebenza kakhulu ekuthengeni kwam okulandelayo okanye ukuba ezi zisombululo zitsha zinokusebenza na.
Aba matshini abenzelwe iinkqubo ezisebenzisa izixhobo ezininzi, nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba abanaso isakhono saneleyo:
Imemori ye-RAM 1GB
Inamachweba amathathu e-USB, i-Datashow port, uxhumano olungenazintambo, amakhadi amaninzi kunye ne-audio / microphone.
Ikeyboard incinci kancinci, akukho ngxaki kwabo bachwetheza ngeminwe emibini (njengenkukhu etya umbona) kodwa ukuba sathatha ikhosi yokuchwetheza sisengabantwana, kuthatha ixesha ukuqhela. Iyacaphukisa kancinci izitshixo zokuskrola kunye nokuphathwa kwempuku ngomnwe owaphukileyo ngesiqingatha; utsalo ekunene unomsebenzi wokwandisa kodwa amaqhosha anzima kakhulu ukucofa; Ndicinga ukuba kungangcono ukusebenza ngempuku yangaphandle.
Esona sizathu sikhulu sokwenza isigqibo sokuba oku akusiyo iqela lomsebenzi onzima, ngenxa yobukhulu besikrini esidinisa amehlo, kulungile ukuhamba kodwa uchithe iiyure ezisibhozo uqhekeza i-coconut kunye ne-vectors kunye nemvelaphi emnyama ... Andicingi. Nangona inezibuko lokudibanisa imonitha xa uyisebenzisa eofisini.
Ngokumalunga nesoftware, iza neWindows XP, elungile ngenxa yokusetyenziswa kobutyebi obuphantsi, nangona iyinguqulelo yaseKhaya yoHlelo olungenayo IIS... embi kwizinto ezininzi. Ikwaza nenguqulelo yeentsuku ezingama-60 yeOfisi ka-2007, kwaye nje ukuba iza neMisebenzi yeMicrosoft, ehlala isuka kwiMicrosoft kodwa ngexabiso eliphantsi kakhulu.
Ndiqhube kule Microstation Geographics V8, exhunywe kwi-database yokufikelela nge-ODBC. Madoda, isebenza ngaphandle kokuphazamiseka okuninzi, i-Bentley Map ivakalelwa kukuba inzima kodwa ingekho kakhulu.
Ilayisha ezintandathu .ecw orthophotos ye-11 MB nganye ayibi. 22 iimephu cadastral dgn 1:1,000… akukho ngxaki.
Ziguqule zibe yi-ecw zibe nguhmr... oh! kulapho izinto ezilungileyo ziqala khona, umatshini kule nto ayinayo ukusebenza okuphezulu kodwa ekugqibeleni uyenzile ngo-2:21 imizuzu, yaguqula i-8MB ecw ukuya kwi-189 MB hmr, ukuguqulwa okungenangqondo, ndiyazi kodwa le fomati iqhuba kakhulu. ngokukhawuleza kwi-Microstation. Andicingi ukuba kuya kuba kuhle ukusebenza noTiff ngenxa yobunzima, kodwa inokuba lukhetho lwe-itif olunamandla ongezelelweyo.
Ngokuqinisekileyo, lo matshini omncinci usebenza kakuhle nge-Microstation, nangona kukho abanye abanekhadi le-NVidia elibanika ngokuqinisekileyo iziphumo ezingcono.
Kwiinkqubo ezikhanyayo, njenge-Microstation, ndiyibona kakuhle. Andicingi ukuba i-gvSIG kunye notshintsho lwayo lwamva nje luya kusebenza ngaphandle kokuba abafana baphucula ukusetyenziswa kobutyebi ngokusebenza ngezaleko ezininzi okanye ukudibanisa kwiinkonzo ze-OGC.
Ndanelisekile ngokubhekiselele kusetyenziso lwam: Ndilayishile Microstation V8, BitCAD, ManifoldGIS, Avira, IMicrosoft Works, Live Umbhali, Foxit y chrome. Emva kweveki ndonelisekile sisimo sam sokuba ngumhambi rhoqo, iblogger kunye nomthandi weCAD/GIS… kubi kakhulu ukuba ibibolekiwe.
I-400 yeedola ezixabisa le nto yokudlala, andiyiboni njengotyalo-mali olubi, kodwa kufuneka ucinge ngenzuzo enokuthi ilindelwe ngabanye. Yenye indlela elungileyo yokucinga onokuthi uyithwale epokothweni yangaphakathi yebhatyi okanye ibhatyi, kuba ubukhulu bobukwi-ajenda, ngelixa kukhuseleka ngakumbi ukuyiphatha phakathi kwebrifkheyisi, umngcipheko omncinci kunokuthwala iTargus. ibrifkheyisi kwindawo apho bonke abaphuli-mthetho bacinga ukuba kukho ngaphakathi.
Kufuneka kwakhona siqwalasele i-cons, kuba nangona ubunzima bayo bulawuleka kakhulu, ekubeni ingazisi iCDrom, le nto yokuncedisa kufuneka ifakwe njengeyongezelelweyo; Nge-8GB ye-USB, ukufakwa kweenkqubo akubonakali kunzima, kodwa ukuba bekuyimfuneko ukuyifomatha okanye ukuyikhupha kwintsholongwane yolwaphulo-mthetho ... Ndiyathandabuza. Phosa imouse engenazingcingo enebhetri yeAA kunye neegraphic tablet...inokuba nzima njenge 14-intshi
Ukuba bekufuneka ndithenge ikhompyuter ephezulu yokusebenza, ezo $500 Compaqs zingaphezulu kwe-2GB ye-RAM, kunye ne-Intel Duo kunye nekhadi levidiyo lomntu. Inyani yeyokuba ixesha elifutshane apho ii-netbooks bezikho ukusukela kwi-ASSUS, ngokuqinisekileyo kunyaka onesiqingatha siya kuba noomatshini bomelele kwezi fomati ezincinci.
Iwebhusayithi: Acer Aspire One
Kuxhomekeke, ukuba kukuzilolonga nje, awuyi kuva ukucotha kakhulu.
Kodwa ukuba izakwenza umsebenzi omninzi, eso sixhobo asanelanga, sivakala sicotha kwaye nobukhulu besikrini budika amatayara amehlo.
Molo, unjani, Intle kakhulu ingxelo yasusa amathandabuzo amaninzi ngaphambi kokuba ndithenge. Ndikubuza umbuzo, ndifunda i-visual sudio 2010 kunye ne-autocad, ucinga ukuba unokusebenza kakuhle ngalo matshini?
Ngokuqinisekileyo kufuneka ikwazi ukusebenza ngenxa yokuba ezo nguqulelo zazilula kakhulu, ndiqikelela ukuba neenguqulelo zika-2002 zinokusebenza kakuhle kulo matshini.
Uxolo, ngaba uyazi ukuba i-AutoCad 2000i inokuqhutywa ngokuqhelekileyo (akukho 3d) ngolu hlobo lwencwadana.
Molweni kunye nebhlog entle kakhulu
hehehe ndine-aspire one, imodeli engaphantsi kwaleyo oye wazama ngayo, efanayo kodwa nge-512 RAM kunye ne-8GB SSD.
Ngekhe ndiyisebenzise njengendawo yokusebenzela, ngakumbi ngenxa yekhibhodi ethi, nangona ingonwabanga kwaphela, iyadinisa xa uchitha ixesha elide.
Kwelinye icala, kwikhompyuter efana neyam, iXP iya kuba ilungile kwaye andiyithandi. Ndibeke i-Debian ngobuncinci kwaye isebenza ngokulula kwaye ilula kwinto endifuna ukuyenza: ukusefa i-intanethi, i-imeyile, incoko, bhala uxwebhu kwaye, ukuba kuyimfuneko, cwangcisa umsi.
Njengoko yayisisipho, andikhalazi, ngoku ngokuqinisekileyo ndiya kukhangela enye enebhetri eninzi, mhlawumbi i-RAM encinci kwaye, ukuba kuyimfuneko, i-intshi ezimbalwa zesikrini. Enye yezi bugs ezine-6 ​​okanye 7 iiyure zokuzimela luvuyo lokwenene.
Kwimeko nayiphi na into, ekhaya sele ndibeke iliso kwi-19 ", into endiyibiza ngokuba "iiglasi" zomncinci 🙂